Qarax Miino Ayaa Saakay Kadhacay Wadada Warshadaha ee Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Qarax Khasaare gaystay ayaa wuxuu ka dhacay wadada warshadaha ee Magaalada Muqdisho, kadib markii gaari ay saarnaayeen ciidamada Booliska la qarxiyay.
Qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso, ayaa lagu soo waramayaa in lala eegtay gaarigaan cabdi bilaha ah ee ciidamada ay saarnaayeen.
Laba askari oo ka tirsan ciidamada Booliska Saldhiga Degmada Dayniile, ayaa dhaawac soo gaaray markii qaraxa miinada ay qabsatay gaarigii ay la socdeen.
Dadka deegaanka ayaa sheegay qaraxa miinada inuu ka dhacay nawaaxiga warshadii taraqa iyo sigaarka ee wadada warshadaha, gaariga la qarxiyayna uu ahaa mid ku qoran Saldhiga Degmada Dayniile.
Saraakiisha ammaanka Degmada Dayniile kama aysan hadlin qaraxaan saaka aroortii ciidamada Booliska lala eegtay.
Wadada Warshadaha dhawr mar sidaan oo kale waxaa uga dhacay qaraxyo lala eegtay ciidamada dowladda xilli ay halkaasi maraayeen.